Wararka Maanta: Arbaco, Oct 17, 2012-Xarakada Al-shabaab oo sheegtay inaysan joojinayn dagaalka ay kula jirto ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM
Afhayeenka howgallada ee Al-shabaab, Sheekh C/casiis Abuu-Muscab oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in dagaalladu aysan joogsanayn illaa ay ciidamada ka socda dalalka Uganda, Burundi, Jabuuti iyo Kenya ay isaga baxayaan guud ahaan dalka Soomaaliya.
"Dagaalka waan wadaynaa illaa aan ka gaarno hadafkeenna oo ah inaan dalka oo dhan ka saarno ciidamada shisheeye, gaar ahaan goobihii ay dhawaan galeen," ayuu yiri afhayeenka howgallada ee Xarakada Al-shabaab.
Sidoo kale, afhayeenku wuxuu ka hadlay dagaal shalay ka dhacay deegaanno ka tirsan gobolka Shabeellada hoose, kuwaasoo ay khasaarooyin fara badan ka dhasheen, isagoo sheegay in dagaalkaas uu ahaa mid ay uga hortagayeen isballaarin ay wadeen ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM.
"Dagaalkii shalay wuxuu ahaa mid aan uga hortagaynay duullaan ay soo qaadeen ciidamada cadowga dib ayaana u celinay, waxaana kaga dilnay dagaalkaas askar badan," ayuu yiri Sheekh Abuu-Muscab oo aan sheegin khasaare dhankooda kasoo gaaray dagaalka.
Xarakada Al-sabaab ayaa tan iyo bishii Ogoosto ee sannadkii hore waxay isaga baxayeen deegaanno badan oo ay ka talinayeen, kuwaasoo ay ka mid tahay magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya.